သက်တန့်ချို: နေပြည်တော် ရေပန်းဥယျာဉ်သို့ အလည်တစ်ခေါက်
ခေတ်လူ(ပျဉ်းမနား) February 27, 2012 at 6:10 PM
ပုံထဲကအမနှစ်ယောက်ကို သေချာ မြင်ဖူးသလိုပဲ
ပုံထဲက အမနှစ်ယောက်ကို သေချာ မြင်ဖူးသလိုပဲ....
ခေတ်လူ(ပျဉ်းမနား) February 27, 2012 at 6:11 PM
ပုံထဲကအမနှစ်ယောက်ကို အသေချာ မြင်ဖူးသလိုပဲ.....
သိင်္ဂါကျော် February 28, 2012 at 2:28 AM
ပုံတွေ လာကြည့်သွားပါတယ်.. :)
Z@! February 28, 2012 at 9:20 AM
ရေပန်းဥယျာဉ်က ခုလိုကျတော့လဲ လှသား.. နေပြည်တော်မှာနေတုန်းက ရုံးနဲ့နီးနီးလေးဆိုတာကိုတောင် မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး.. ခုတစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်ရင်တော့ သွားဦးမှပါ ဟဲဟဲ
စန္ဒကူး February 28, 2012 at 2:26 PM
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) February 29, 2012 at 12:44 PM
အခုမှဘဲ ဆရာဝန်ကြီး ကိုမြင်ဖူးတော့တယ်။
Yin Sue February 29, 2012 at 3:22 PM
ရောက်မှ သွားဦးမယ်အစ်ကိုရေ....အစ်ကို့စာတွေကို ဆက်ဆက်လာဖတ်နေပါတယ်......အားပေးလျှက်....
aungmyat February 29, 2012 at 5:35 PM
ဟုတ်တယ်ကွ သွားဦးမှ မရောက်တာကြာပြီ
ဟိုတစ်နေ့ ကတော့ ရောက်ခဲ့ တယ်
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) February 29, 2012 at 10:42 PM
ပျဉ်းမနား ၇လမ်းထဲက နန်းစိန်ကဖေးဆိုင်မှာတွေ့တာ ကိုသက်တန့်များလားဗျာ့
ကားပေါ်ကနေ ပုံးတွေသယ်ချနေတယ် လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေထင်တယ် အပေါ်ထပ်မှာက မင်္ဂလာဆောင်လားပဲ ကိုသက်တန့်နဲ့တူတယ်လို့ သူငယ်ချင်းနဲ့ပြောနေတာ မဖြစ်နိုင်ဖူး ကိုသက်တန့်က မဝဖူးလုပ်နေတာ ပုံမှာမြင်တိုင်းဆို အရင်ကထက်ဝလာတာပဲ အဲဆိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာ ကိုသက်တန့်များလား ??
သက်တန့်ချို March 1, 2012 at 11:14 AM
သေချာတာပေါ့ကိုဘကြိုင်ရယ် လက်ဖွဲ့ပစ္စည်မဟုတ်ပါဘူးကံစမ်းမဲဖောက်ပေးတာပါ အဲဒီနန်းစိန်အပေါ်ထပ်မှာ Product launch လုပ်တယ်လေအဲဒီနေ့ကအဲဒါကြောင့်ပါ အရင်ကထက် ၀လာတာပါ ဟီးဟီး ခေါ်လိုက်ပြီးရော ကျနော်ကမတွေ့မိလို့ လက်ဖက်ရည်တိုက်ပါတယ်း)))))
ဟာဗျာ တူပါတယ်တူပါတယ်လုပ်နေတာ သူငယ်ချင်းနဲ့ငြင်းပြီးခေါ်မလို့ပဲ ခင်ညားက ရှုတည်တည်ကြီးနဲ့ ဝနေတော့ လန့်ထှာာလေ တိန် နို့မို့ ကျွန်တော်လည်း ဧည့်ခံပါတယ် သိပါဖူးဗျာာာ နောက်တခါလာရင် မေးလ်လေးတော့ပို့ထားဗျာ့
နေပြည်တော်က ကျွန်တော့်ဒုတိယအိမ်ဖြစ်နေထှား)း)
Tina Kyi March 9, 2012 at 2:34 PM